कसरी ट्विटर प्रयोग गर्ने: ट्यूटोरियल चरण-दर-चरण व्याख्या गरियो ग्याजेट समाचार
पक्कै पनि तपाईसँग धेरै जसो हुन्छ यस अवसरमा ट्विटरको बारेमा सुने। यस्तो सम्भावना छ कि त्यहाँ कोहीहरू छन् जसले यसलाई नियमित आधारमा प्रयोग गर्छन् वा अरूले केवल कहिलेकाँही यो शब्द सुनेका हुन सक्दछन्। अब हामी तपाइँलाई ट्विटरको बारेमा सबै कुरा बताउन जाँदैछौं।
हामी तपाईंलाई भन्छौं यो के हो, यो केको लागि हो र हामीले यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्दछ उही। तसर्थ, यदि त्यहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो यो के हो जान्दैनन् वा जसलाई थाहा छैन कि यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, यी श doubts्काहरू यस पोष्टभरि नै समाधान हुनेछ। थप पत्ता लगाउन तयार हुनुहुन्छ?
1 ट्विटर के हो?
2 एक ट्विटर खाता कसरी बनाउने
3 ट्विटर कसरी प्रयोग गर्ने
3.1 खाताहरू अनुसरण गर्नुहोस्
3.4 फोटो, भिडियो र GIFS
3.5 निजी सन्देशहरू
3.6 मलाई यो मन पर्छ
3.7 अनुयायीहरू जीत
ट्विटर के हो?
ट्विटर एक माइक्रोब्लगिंग सेवा हो जुन २०० in मा ज्याक डोर्सी द्वारा बनाईएको थियो। निश्चय पनि माइक्रोब्लगिंग शब्दले प्रायः धेरै कुरा गर्दैन, तर हामी सामाजिक नेटवर्कको बारेमा कुरा गर्न सक्छौं। जब आज सोशल मीडियामा आउँदछ, यो ती मध्ये एक हो। यो एक नेटवर्क हो जुन हामीले कम्प्युटर, ट्याब्लेट वा मोबाइल फोनमा प्रयोग गर्न सक्दछौं। ती सबै उपलब्ध छन्, जुन हामी एकल खातासँग पहुँच गर्न सक्दछौं र जसको अपरेशन समान छ।
ट्विटर एक सामाजिक नेटवर्क को लागी प्रख्यात भयो जसमा धेरै छोटो र संक्षिप्त सन्देशहरू साझा गर्न। त्यहाँ क्यारेक्टरहरूको सीमा थियो जुन प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो, यस अवस्थामा यो १ 140० क्यारेक्टरहरू थिए। जे होस् हाल यो आंकडा दोब्बर भयो, सक्षम हुँदै हाल २ 280० अक्षर प्रयोग गर्नुहोस्। जबकि सामाजिक नेटवर्क को विचार एक समान रहन्छ, यसमा छोटो सन्देश साटासाट गर्नुहोस्।
समयसँगै, ट्विटर एक भयो सामाजिक नेटवर्क जसमा यो कुराकानी वा बहस उत्पन्न गर्न खोजिएको हो। यो धेरै व्यक्ति द्वारा वर्तमान मुद्दाहरु मा आफ्नो राय व्यक्त गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसमा फोटो वा भिडियोहरू अपलोड गर्न सक्षम हुनुका साथै प्रयोगकर्ताहरूले पाठ सन्देशहरू लेख्न सक्दछन्। हामी अन्य व्यक्तिहरू, कम्पनीहरू वा यसमार्फत मिडियालाई पछ्याउन सक्छौं, किनकि धेरै जसो नेटवर्कमा प्रोफाइल छन्।
यस तरिकाले, ट्विटर होaआदर्श विकल्प संसारमा के भइरहेको छ त्यसमा अप टु डेट राख्न। तपाईले आफ्नो राय अभिव्यक्त गर्नुका साथसाथै समाचार अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं साथीहरू वा नजिकका व्यक्तिहरू पनि पछ्याउन सक्नुहुनेछ र उनीहरूले के गर्छन् वा सोच्दछन् भनेर सतर्क हुन सक्नुहुन्छ। छोटकरीमा, यसले धेरै विकल्पहरू प्रदान गर्दछ।
एक ट्विटर खाता कसरी बनाउने
पहिलो चरण हामीले सामाजिक नेटवर्क प्रयोग गर्न सक्षम हुनको लागि बाहिर बोक्नु पर्छ उहीमा खाता खोल्नु हो। यो गर्न, केवल तपाईंको प्रविष्ट गर्नुहोस् वेब पृष्ठ। यसैबाट खाता दर्ता प्रक्रिया सुरू हुन्छ। तपाईं देख्न लाग्नु भएको छ कि एक विकल्प पर्दामा देखा पर्छ कि रेजिस्टर भन्छन्, जसमा तपाईं खाता बनाउन को प्रक्रिया शुरू गर्न क्लिक गर्नुपर्दछ।
तिनीहरूले हामीलाई पहिले सोध्छन् नाम र फोन नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्। जे होस् यदि तपाईं चाहानु हुन्न भने, यो फोन नम्बरको सट्टा ईमेल प्रयोग गर्न सम्भव छ। एक पटक डाटा प्रविष्ट गरिसकेपछि तपाईले अर्को क्लिक गर्नुपर्नेछ। त्यसो भए, केहि विकल्पहरू देखा पर्दछ जुन त्यस समयमा रमाईलो वा सान्दर्भिक हुँदैन, त्यसैले जारी थिच्नुहोस्। तपाईं अन्तिम स्क्रिनमा पुग्नुहुन्छ जहाँ तपाईं खाताको सिर्जना पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ।
जब हामी ट्विटरमा खाता पहिले नै बनाइसकेका छौं, हामी गर्नेछौं यसको विभिन्न पक्ष कन्फिगर गर्न सक्षम हुनुहोस्। हामी एक प्रोफाइल फोटो, प्रोफाइलमा वर्णन थप्न सक्दछौं वा हाम्रो वेबसाइटमा लिंक राख्न सक्दछौं, यदि तपाईं सामाजिक नेटवर्कमा तपाईंको वेबसाइट प्रमोट गर्दै हुनुहुन्छ भने। हामी यो पनि निर्धारण गर्न सक्दछौं कि हामी एक सार्वजनिक प्रोफाइल (जहाँ व्यक्तिहरूले हामी के लेख्न र अपलोड गर्न सक्दछौं) वा एक निजी चाहिन्छ। तपाईं प्रोफाइल सेटि photoमा क्लिक गरेर र त्यसपछि गोपनीयता र सुरक्षा सेक्सन प्रविष्ट गरेर, यो सेटि theहरूमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एक सेक्शन छ तपाईका ट्वीट्स लाई सुरक्षा गर्नुहोस्, जसले तपाईको प्रोफाइल निजी बनाउँछ।
एक पटक हामीले सामाजिक नेटवर्कमा हाम्रो प्रोफाइल सिर्जना गरेपछि, यो प्रयोग गर्न सुरु गर्ने समय भयो। त्यसकारण, त्यहाँ धेरै पक्षहरू छन् जुन सामान्य रूपमा ट्विटर प्रयोग गर्नका लागि जान्नु आवश्यक पर्दछ र सामाजिक नेटवर्कमा खाताबाट अधिक प्राप्त गर्न सक्षम हुन। हामी यी प्रत्येक पक्षको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्छौं।
खाताहरू अनुसरण गर्नुहोस्
हामीले ट्विटरको लागि प्रयोग गर्ने चीजहरू मध्ये एक विशेष विषयहरूमा अप टु डेट राख्नु वा केही व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा रहनु हो। त्यसो भए, हामी उही खाताहरु अनुसरण गर्न सक्छौं। यो गर्नका लागि हामी सामाजिक नेटवर्कमा खोजी प्रयोग गर्न सक्दछौं कम्पनी, मध्यम वा व्यक्ति जो हाम्रो रुचि छ को प्रोफाइल को लागी जान। थप रूपमा, गृह पृष्ठमा प्राय: प्रोफाइलहरू छन् जुन हामीलाई रुचि पर्दछ, स्क्रिनको दायाँ तिर।
जब तपाईं खाताको प्रोफाइलमा हुनुहुन्छ, तपाईंले स्क्रीनको माथिल्लो दाहिने भागमा त्यो देख्नुहुनेछ तपाइँले खाता अनुसरण गर्न विकल्प पाउनुहुन्छ। यो खाता अनुसरण गर्न तपाईले त्यस बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। यस तरिकाले, यो खाता ट्विटरमा अपलोड गर्ने सबै प्रकाशनहरू गृह पृष्ठमा देखा पर्नेछ। त्यसोभए तिनीहरू पनी अपलोड र के गर्छन् त्यसमा तपाईं सधैं अपडेट रहनुहुनेछ। तपाईले चाहानु भएको सबै खाताहरू पालना गर्न तपाईं सक्षम हुनुहुनेछ। यद्यपि एक निजी खाता को मामला मा, तपाइँ के गर्नुहुन्छ एक अनुरोध पठाउन छ र खाता प्रबन्ध गर्ने व्यक्तिले निर्णय गर्छ कि तिनीहरूले तपाइँलाई स्वीकार्छन् वा गर्दैनन्।
ह्याशटैगहरू # पाउन्ड आइकनको साथ प्रयोग गरिन्छ। ती ट्विटरमा नियमित प्रयोग गरिन्छ, निश्चित विषयको बारेमा कुरा गर्न। सम्भवतः त्यहाँ केहि शीर्षकहरू छन् जुन त्यस दिन हालको छ। त्यसोभए यदि तपाइँ आफ्नो राय दिन चाहानुहुन्छ भने तपाई त्यो हैशटैग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि सामाजिक नेटवर्कमा तिनीहरू सबैका लागि प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणको लागि, यदि तपाईं एक श्रृंखला वा टेलिभिजन कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं डिसेम्बर श्रृंखला, चलचित्र वा श्रृ series्खलाको नामको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
ट्विटरमा, ह्याशट्यागको प्रयोग सामान्य छ। तपाईं होम पेजमा देख्न सक्नुहुनेछ कि त्यहाँ तिनीहरूका लागि सेक्शन छ, ट्रेन्ड्स। उही धन्यवाद तपाईं हालको वा सबै भन्दा लोकप्रिय शीर्षकहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यस समयमा तपाईंको क्षेत्रमा। त्यसोभए अपडेट रहन धेरै सजिलो छ र तपाईं उक्त ह्यासट्यागको प्रयोग गरेर कुराकानीमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ। ट्विटरले तपाइँलाई सबै चीजको लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिनुहुन्छ, त्यो आइकन प्रस्तुत गरेर।
निस्सन्देह, यदि तपाईं ह्याशट्याग प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो गर्ने तरिका # साथीहरू छन्। त्यो हो, परिचय पाउन्ड आइकन र त्यसपछि शब्द। त्यहाँ आइकन र शब्द बिच ठाउँ छोड्दैन। अन्यथा यो एक हैशटैग हुनेछैन। तिनीहरू एक शीर्षकमा अप-टु-डेट रहन वा व्यक्तिले तपाईंलाई मन परेको चीजको बारेमा कुरा गरिरहेको एक तरीका हुन सक्छन्। त्यहाँ कुनै ह्यासट्याग सीमा छैन। यदि तपाईं एक प्रयोग गर्नुहोस् जुन सामाजिक नेटवर्कमा पहिले नै प्रयोग गरीएको छ भने, तल सूची देखा पर्नेछ तीसँग प्रयोग हुनेछ जुन तपाईं प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईं यो फोटोमा देख्न सक्नुहुनेछ।
जे होस् यदि तपाईंसँग एउटा ट्विटर खाता छ जसमा तपाईं आफ्नो व्यवसाय प्रमोट गर्न चाहानुहुन्छ, केही थोरै प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ। धेरै भन्दा धेरै मा ती दुई हुन सक्छ। धेरै व्यक्ति ह्यासट्याग प्रयोग गरेर सन्देश अपलोड गर्ने व्यक्ति धेरै केसहरूमा स्प्याम मानिन्छ। तपाईंको विश्वसनीयता लाई असर गर्ने केहि चीज।
उल्लेख तब हुन्छ जब हामी अर्को व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा सन्देश लेख्न चाहन्छौं। यो ट्वीटको जवाफ हुन सक्छ कि एक व्यक्ति सामाजिक नेटवर्क मा अपलोड गरेको छ, वा हामी केवल यो व्यक्ति हामी साझा गर्न चाहानु भएको सन्देश हेर्न चाहन्छौं। यो गर्न, सन्देश लेख्दा तपाईंले @ प्रतीक र त्यस व्यक्तिको वा खाताको नाम प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
तपाईंले याद गर्नुहुनेछ, ट्विटर प्रोफाइलमा @username को साथ पहिचान गरियो। तसर्थ, यदि तपाईं सन्देशमा कसैको उल्लेख गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईं साझेदारी गर्न लाग्नु भएको छ भने तपाईंले समान बानी अनुसरण गर्नु पर्छ। यो सन्देश लेख्दा तपाईले देख्नुहुनेछ कि सामाजिक नेटवर्कले तपाईंलाई सुझाव दिईरहेको हुन्छ, तपाईले लेख्नु भएको अक्षरहरूसँग मेल खाने नामहरूको। तपाईंले केवल व्यक्ति वा खाता चयन गर्नुपर्नेछ जुन तपाईं यो सन्देश पठाउन चाहानुहुन्छ।
फोटो, भिडियो र GIFS
यस्तो हुन सक्छ कि केहि अवसरमा तपाइँ सामाजिक नेटवर्कमा सन्देश अपलोड गर्न चाहानुहुन्छ केहि भिडियो, फोटो वा GIF प्रयोग गर्दै। यो गर्ने तरिका धेरै सरल छ। प्रश्नमा ट्वीट लेख्ने क्रममा, उही क्षेत्र जुन हामीले उल्लेख गरेको वा ह्यासट्यागहरू लेखेका छौं, हामी देख्न सक्छौं कि धेरै आईकन खाली बक्स मुनि देखा पर्दछन्।
त्यहाँ एक फोटो अपलोड गर्न, एक GIF अपलोड गर्न वा एक सर्वेक्षण अपलोड गर्न आईकन छ। तपाईंले भर्खरै गर्नु पर्छ तपाईलाई रूची भएकोमा क्लिक गर्नुहोस् त्यस सन्देशमा इच्छित सामग्री अपलोड गर्न। तपाईं तिनीहरूलाई तपाईंको कम्प्युटर वा फोनबाट अपलोड गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, किनकि ती ग्यालरीबाट थपिएका छन्। त्यसोभए तपाईंले ती व्यक्तिलाई पठाउन चाहानु भएको फाइल रोज्नु पर्दछ।
यस तरिका मा, तपाईंले आफ्ना अनुयायीहरूसँग साझेदारी गर्न चाहानुभएको फोटो अपलोड गरिनेछ सामाजिक नेटवर्कमा। सामान्यतया, ट्विटरले तपाईंलाई लगभग सबै प्रकारका फोटोहरू अपलोड गर्न अनुमति दिन्छ, तिनीहरू यस सन्दर्भमा सबै भन्दा लचिलो सामाजिक नेटवर्क हुन्। जबकि त्यहाँ सामान्यतया केहि अपवादहरू छन् जुन अपलोड गर्न सम्भव छैन। तर यस अर्थमा, तपाईं सामाजिक नेटवर्क मा एक फोटो अपलोड गर्दा समस्या हुनुहुन्न।
थप रूपमा, यो केहि अवसरहरूमा तपाईंले एक प्रयोगकर्ता अपलोड गरेको देख्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई रूचि छ। तपाईं यसलाई विभिन्न तरिकाहरूमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं प्रश्न सोध्न वा कसैसँग कुरा गर्न चाहानुहुन्छ, तर व्यक्तिगत रूपमा। ट्विटरले निजी सन्देशहरू पठाउन संभावना प्रदान गर्दछ, त्यसैले तपाईं च्याट कुराकानी छ कि कसैले पनि हेर्न सक्षम हुनेछ। यो प्राप्त गर्न को लागी धेरै साधारण छ। सामाजिक नेटवर्कको गृह पृष्ठमा तपाईले देख्नुहुनेछ कि माथिको भागमा सन्देशहरू भनिन्छ। प्रविष्ट गर्न तपाईले यसमा क्लिक गर्नुपर्नेछ।
तपाईं कुराकानी सुरु गर्न को लागी एक नयाँ विन्डो प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यहाँ तपाईं हुनेछ व्यक्तिको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् जसमा तपाई निजी सन्देश पठाउन चाहानुहुन्छ। हामी नाम खोज्दछौं र सूचीमा जुन देखाइएको छ, व्यक्तिमा चयन गर्नुहोस् जुन तपाईं लेख्न चाहानुहुन्छ। निजी सन्देशहरूमा तपाईं चरित्र सीमा बिना नै लेख्न सक्नुहुनेछ।
त्यसोभए जब तपाईंसँग यो हुन्छ, मात्र पठाउनुहोस् मा थिच्नुहोस्। जब ती व्यक्तिले तपाईंलाई जवाफ दिन्छ, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि ट्विटरमा सन्देश आइकनमा, स्क्रीनको शीर्षमा देखा पर्ने एक, तपाईले नम्बर सहित एउटा प्रतिमा पाउनुहुनेछ। यसको मतलव तपाईसँग पढ्न बाँकी रहेको सन्देश छ। पक्कै पनि यो उत्तर हो।
यदि कुनै समयमा ट्विटरमा, तपाईले आफ्नो लागी एक सन्देश देख्नु भयो, तपाईले यो मनपराउनु हुन्छ। यस तरिकाले, तपाईंको आफ्नै प्रोफाइलमा तपाईं ती फोटो वा ट्वीटहरू देख्न सक्षम हुनुहुनेछ जुन तपाईंले जहिले पनि मनपराउनुभएको छ। यो केही चीजहरू बचत गर्ने एउटा तरिका हो जुन तपाईंलाई रमाईलो लाग्यो। जस्तो बटन मुटुको आकारको हुन्छ र तपाईं यसलाई सन्देशको तलमा देख्नुहुन्छ जुन अन्य खाताहरू साझेदारी गर्दछ।
यस तरीकाले, यो प्रोफाइलमा स्पष्ट पार्नुको साथै तपाईंले अपलोड गरेको फोटो वा ट्वीट मनपर्दछ कि, तपाईंको प्रोफाइलमा बचत गरिएको छ। यदि कुनै विन्दुमा तपाईंले आफ्नो मन परिवर्तन गर्नुभयो भने, तपाईंले केवल मुटु आइकनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ र तपाईंलाई त्यो ट्वीट मनपर्दैन। यो सजिलो छ।
यदि तपाईंसँग ट्विटरमा प्रोफाइल छ जहाँ तपाईं तपाईंको व्यवसाय, तपाईंको सेवाहरू वा तपाईं कलाकार हो, वा तपाईंको वेबसाइट बढावा दिन चाहनुहुन्छ, यो अनुयायीहरू प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यस तरीकाले, तपाईं अधिक दृश्यात्मकता प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, ताकि तपाईं अधिक ग्राहकहरू पाउनुहुनेछ वा त्यहाँ के तपाईं बढि रुचि राख्ने बढी व्यक्तिहरू छन्। यो प्राप्त गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्.
भाग्यवश तिनीहरू जटिल छैनन् र तपाईं समस्या बिना सिक्न सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले, तपाईं सामाजिक नेटवर्कमा अनुयायीहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, यस्तो चीज जसले तपाईंको व्यवसायलाई विस्तार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ वा कलाकारको रूपमा तपाईंको सीपहरू बनाउँदछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » ट्विटर कसरी प्रयोग गर्ने